Bayern München oo markale dubatay kooxda Chelsea isla markaana iska xaadirisay wareega siddeeda ee Champions League… +SAWIRRO – Gool FM
(Yurub) 08 Agoosto 2020. Bayern München ayaa markale dubatay kooxda Chelsea isla markaana iska xaadirisay siddeeda Champions League, kaddib markii ay ku adkaatay 4-1, kulan xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Allianz Arena, waxayna cel-celis ahaan Bayern ku adkaatay labada kulan 7-1.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 2-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Bayern München.
Daqiiqadii 10-aad kooxda Bayern München ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib rigoore ay heshay waxaa gool ka dhigay weeraryahankooda Robert Lewandowski, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 1-0.
24 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay Bayern München ayaa la timid goolkeeda labaad, waxaana 2-0 ka dhigay Ivan Perisic.
Laakiin daqiiqadii 44-aad kooxda martida aheyd ee Chelsea ayaa dhalisay gool, waxaana 2-1 ka dhigay Tammy Abraham.
Daqiiqadii 76-aad Bayern München ayaa sii dheereysatay hoggaaminta dheesha waxaana 3-1 ka dhigay Corentin Tolisso.
Markale daqiiqadii 84-aad Robert Lewandowski ayaa si toos ah u niyadjibiyay kooxda Chelsea wuxuuna dheesha ka dhigay 4-1.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 4-1 ay kaga adkaatay Bayern München kooxda Chelsea oo marti ugu aheyd garoonka Allianz Arena. Waxayna naadiga reer Germany cel-celis ahaan goolashii ay labada kulan ku adkaadeen ay tahay 7-1.